सरकार विकास र समृद्धिको दिशामा : मन्त्री अर्याल – Shuva News
सरकार विकास र समृद्धिको दिशामा : मन्त्री अर्याल
Shuvanews ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार June 15, 2019 225 Views
कला राना, वालिङ
नेपाल सरकारका भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकार विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढेको दावी गर्नुभएको छ । शनिबार स्याङ्जाको वालिङमा आयोजिन जनतासंग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारको निति तथा कार्यक्रम र बजेटले सरकार समृद्धितर्फ अगाडि बढेको संकेत दिएको बताउनुभएको हो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,“सरकारले पहिलो वर्ष निति निर्माण, पुर्वाधार आधार ग¥यो अव दोस्रो वर्षमा सरकार विकासको मार्गमा हिँडेको छ ।” प्रमुख प्रतिपक्षी कागे्रसलाई संकेत गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “खुल्ला बहस गरौँ, अनावश्यक प्रचारबाजीमा नलागौँ ।”
सगरमाथाको उचाई मापनका क्रममा उचाई मापन टोलीलाई विदाई गर्न, हौसला बढाउन आधार शिविर पुग्दा गरिएको अर्नगल प्रचारप्रति खण्डन गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “अनावश्यक प्रचारबाजी गरियो, ५० लाख होईन् ११ करोडको लगानीमा सगरमाथाको वास्तविक उचाई मापनका लागी सरकार लागेको हो ।” आँफूसंग जोडिएको समाचार सत्य नभएको भन्दै अर्यालले भन्नुभयो, “स्वर्ग जस्तै ठाउँमा पुग्दा फोटो र सेल्फी खिच्नु त स्वभाविक होईन् र ? सरकार करौडौँ खर्च गरेर पहिचानको मापन गर्दै छ ।”
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत धेरैको ज्यान लिएको सिद्धबाबा सडकमा सुरुङमार्गका लागी डिपिआर तयार गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसले समग्र राजमार्गको विकासमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । त्रिदेशीय सिमाना जेडिएको सिद्धार्थ राजमार्ग विकासको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो । लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई स्याङ्जा हुँदै पोखरा र पोखरा आएका पर्यटकलाई स्याङ्जा हुँदै लुम्बिनी पु¥याउँदै गर्दा यहाँका होमिस्टे, प्याराग्लाईडिङ, अन्य पर्यटकीय स्थलहरुलाई पर्यटकको रोजाई बनाउन सकिने बताउनुभयो । हरेक विकास गर्दै गर्दा दिर्घकालिन योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको भन्दै अहिलेको विकासले ५० वर्षपछिलाई टेवा पुग्ने खालको आयोजनाहरु समेत रहेको बताउनुभयो । ५ वर्षेकार्यकालमा बाहिरिँदै गर्दा शिर उच्च गरेर हिंड्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा सरकार हिँडिरहेको बताउनुभयो ।
जिल्लामा २८ मोटरेवल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको भन्दै आँधीखोला हाईड्याम उच्च प्राथामिकतामा रहेको बताउनुभयो । अवका विकासे योजना पछिल्ला संभाव्यताको समेत अध्ययन गरि अगाडि बढेकाले अबको पोखरा पछिको प्याराग्लाईडिङको क्षेत्र स्याङ्जा भएकाले पर्यटकीय हिसाबले स्याङ्जा अगाडि बढ्दै गएको बताउनुभयो । प्याराग्लाईडिङ क्षेत्र स्वरेक जानका लागी सुन्दरबजार र वालिङबाट सडक पिचन गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, वालिङ, “स्वरेक हुँदै डुम्रेञ्याङ अकला हँदै सेतिवेणी सम्म छिमेकी जिल्ला छुने योजनामा हाँमी छौँ । ”
अस्पतालका सवालमा स्याङ्जाका ११ पालिका मध्ये ६ जिल्लामा १५÷१५ सैयाको अस्पताल बन्ने र १५बाट विस्तारै ५०÷१०० सैयासम्म पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र स्वरेक मैदान, सतिवेणी, अकला, गह्रौँसुर, सतौँचण्डकी प्राथामिकतामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य र शिक्षा मानिसको नैर्सिगक अधिकार भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य, विमा, गरिव पहिचान, राष्ट्रिय पचिय वितरणमा स्याङ्जा समेत समेटिनु सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय हुने दावी गर्नुभयो ।
कृषि विना सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने भन्दै कृषिलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको बताउनुभयो । कृषि उपजलाई भण्डारणका लागी जिल्लामा शितभण्डार निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी वालिङ नगरकमिटिले जनतासंग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले विकास बजारकेन्द्रित भएको बताएका थिए । वडा नं. १४का जनप्रतिनिधिले समेत गाउँतिर विकास गर्न सहज वातावरण नभएको गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागिहरुले आँधीखोला हाईड्याम, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, कृषि उपजको बजारीकरणका लागी पहल गरिदिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति सभापति एव्ां सांसद मोहन रेग्मीले यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा समन्वयात्मक भुमिकामा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्मार्टको अवधारणामा अगाडि बढेको वालिङलाई अगाडि बढाउन हरेक पक्षलाई स्मार्ट बनाउन ध्यानार्कषण भएको बताउनुभयो । विनियोजित रकमलाई सही ढंगले लगाउन सकिएन भने त्यस्ता योजना सफल नहुँने भन्दै यसका लागी जनप्रतिनिधि र स्थानीयको भुमिका समत्वयात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, जनताको हरेक आवश्यकतामा हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ, सबैको चासोको रुपमा रहेका आँधीखोला हाईड्याममा केन्द्रसकार प्रतिवद्ध छ ।” गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका लागी प्रतिवद्ध रहेको भन्दै युवालाई रोजगारका लागी एक स्थानीय तह, एक उद्योग, उत्पादनमा योजनाका साथ लागी परेको सांसद रेग्मीले बताउनुभयो । नेकपा नगर अध्यक्ष राजेन्द्र डुम्रेले कार्यक्रममा बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिवन रमेश अर्यालले गर्नुभएको थियो ।